Bible Mmuae ԑkɔ ma Yehowa Adansefo – 4Jehovah (Yehowa)
Category: Bible Mmuae ԑkɔ ma Yehowa Adansefo
ENTI NNIPAKUW KԐSE A ԐWƆ ADIYISԐM NO WƆ ASASE SO BERE A HARMAGEDON BԐPAE AGU?
Adiyisɛm 7:9, 15: …“hwɛ! Nnipakuw kɛse a onipa biara antumi ankan wɔn a wofi amanaman ne mmusuakuw ne nkurɔfokuw ne kasa horow mu gyinagyina Ahengua no anim ne Oguammaa no anim. Na eyi nti na wogyina, Onyankopɔn ahengua no anim na wɔresom no anɔpa ne anadwo wɔ N’asɔrefie hɔ…”-Wiase Foforo Nkyerɛase.
Bɛyɛ mfe pii atwam Yehowa Adansefo akyerɛkyerɛ sɛ wɔn mu nnipa dodow no benya owusɔre atra Paradise Asase so afebɔɔ, afei nso nnipa 144000 a wɔapaw wɔn na wɔne Yesu Kristo bɛtraa adi hene wɔ Ɔsoro. Akyidifo akuw- abien yi na wɔfrɛ wɔn “Asase sofo” ne “Ɔsoro kɔfo”. Wɔsan frɛ Asase sofo no “Nguan foforo a ɛwɔ Yohane 10:16 ne “Kuw Kɛse” a ɛwɔ Adiyisɛm 7:9 ɛnna wɔfrɛ Ɔsoro kɔfo no “Nguankuw ketewa” a ɛwɔ Luka 12:32 ne “Nsrafo anaa Nkaefo” a ɛwɔ 2 Korintofo 1:21-22 ne Mpem Ɔha Aduanan Anan No”a ɛwɔ Adiyisɛm 7 ne 14. Nsɛmfua eyinom di akoten mpɛn pii wɔ Ɔwɛn Aban gyidi nhyehyɛe mu de si akuw abien yi so dua. Continue reading “Enti nnipakuw kɛse a ɛwɔ adiyisɛm no wɔ asase so bere a Harmagedon bɛpae agu?”
Author WebmasterPosted on May 13, 2013 May 13, 2013 Categories Bible Mmuae ԑkɔ ma Yehowa Adansefo, Yehowa Adansefo GyidiTags 144000 Kuw a Wɔasra wɔn, Harmagedon ne Awie No, Owu Akyi Asetena, Owusɔre, Ɔsoro, Paradise ne Ahenni no
Yehowa Adansefo bara mogya wɔtwe gu nipaduam
.:DƐN NTI NA YEHOWA ADANSEFO PO MOGYA WƆTWE GU NIPADUAM?-So Wɔbarae Nnuru Wɔde Si Nyarewa Kwan (Vaccination) ne Honam Akwaa Wɔsesa (Organ Transplant)?
“Mani gye Yehow a Adansefo Som ho, nanso meho pere me sɛ mehu nea enti a Yehowa Adansefo mpene mogya wɔtwe gu nipaduam so. Minim Bible nkyekyem a ɛka fa mogya ɛnsɛ sɛ yedi ho, nanso wobetumi akyerɛkyerɛ nea enti a mogya a wodi kyerɛ mogya wɔtwe gu nipaduam? Mate nso sɛ Yehowa Adansefo barae nnuru a wɔde si nyarewa kwan ne honam akwaa wɔsesa . Ɛyɛ Nokwarɛ?”
Wɔ asɛmmisa no yɛ nea ɛtɔ asom efisɛ abirabɔ kɛse wɔ sɛnea Yehowa Adansefo kyerɛkyerɛ Bible akenkan a ɛkasa tia mogya a wodi ne mogya a wɔtwe gu nipaduam ankasa ntam. Yudafo mapa no yɛɛ nnipa a wɔyɛ ahwɛyiye sɛ wobedi Kyerɛwnsɛm eyinom a ɛwɔ Mose mmara no mu so kyɛn Yehowa Adansefo no koraa. Nanso, woatwetwɛn wɔnan ase sɛ wɔbɛgye mogya, afei Kristofo asafo nyinaa ne Ɔsom akuw a wɔka sɛ wodi Bible nnyinasosɛm so no, Yehowa Adansefo Ɔsom no NKUTOO ne Ɔsom a ɔkyerɛ sɛ Bible nkyekyem eyinom (Genesis 9:3-4, Levitikus 17:10, Asomafo Nnwuma 15:28-29) kasa fa mogya a wodi denam nipaduam a wɔtwe gu, a ɛnyɛ mogya a wodi ankasa sɛ aduan. Continue reading “Yehowa Adansefo bara mogya wɔtwe gu nipaduam”
Author WebmasterPosted on May 6, 2013 January 15, 2015 Categories Bible Mmuae ԑkɔ ma Yehowa Adansefo, Yehowa Adansefo GyidiTags Gyidi mu Nsakrae, Mogya a wɔtwe gu Nipaduam
So Yehowa Adansefo Bible no, wiase foforo nkyerԐase no, yԐ nkyerԐase pa a?
O YEHOWA ADANSEFO BIBLE NO, WIASE FOFORO NKYERԐASE NO, YԐ NKYERԐASE PA A?
Ɔwɛn Aban Bible ne Nhomawa Asafo no yɛ nea wonim no sɛ ɔsom a ɔpo Yesu Kristo Nyameyɛ. Ne saa nti, bere a wotintimii wɔn ankasa Bible Nkyerɛase no (Wiase Foforo Nkyerɛase) wɔyɛɛ nea wobetumi biara maa ɛbɛdaa adi sɛ kyerɛwnsɛm no mfoa adwene sɛ Yesu Kristo yɛ Onyankopɔn (Yehowa) so. Ama wɔayi adwene afi Yesu Kristo so sɛ ɔyɛ Onyankopɔn no, wɔde edin Yehowa (efi Hebri nkyerɛwde YHWH a egyina hɔ ma Onyankopɔn din) hyɛe “Theos”-Onyankopɔn (God) ananmu, ɛnna wɔde Yehowa (Jehovah) hyɛe “Kuriou” Awurade (Lord) ananmu wɔ Kristofo Hela Kyerɛwnsɛm (Apam Foforo) nkyekyem ahorow bebree mu. Enti, wɔmaa nsonsonoe bɛdaa Yehowa Nyankopɔn ne Yesu Kristo ntam a Kyerɛwnsɛm no mfoa so. Wɔasan akyinkyim nkyekyem ahorow a ɛfoa Yesu Kristo Nyameyɛ no so, sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn gyidi a ɛkasa tia Nyankopɔn Baasakoro anya nkɔso. Kyerɛwtohɔ a edidi so yi (Ɔsom Adwumakuw a ɔde mmoa ma wɔn a woafi Ɔwɛn Aban no mu na wɔrehyɛ asetena foforo ase ɛnna ɛhyehyɛe nsɛm yi) yɛ kyerɛwtohɔ a ɛyɛ Bible nkyekyem a ɛma Ɔwɛn Aban Asafo Nyankopɔn Baasakoro gyidi a ɔnye nni no da adi wɔ wɔn Wiase Foforo Nkyerɛase no mu. Yɛhyɛ akenkanfo nkuran sɛ wɔnyɛ nhwehwɛmu wɔ mfomso ahorow yi wɔ Hela ne Borɔfo Nkabom Bible anaasɛ Ɔwɛn Aban Asafo Kingdom Interlinear Hela Kyerɛwnsɛm Nkyerɛase mu. Continue reading “So Yehowa Adansefo Bible no, wiase foforo nkyerԐase no, yԐ nkyerԐase pa a?”
Author WebmasterPosted on April 23, 2013 July 22, 2013 Categories Bible Mmuae ԑkɔ ma Yehowa Adansefo, Yehowa Adansefo GyidiTags Nipakō Yesu Kristo yɛ, Nyame Din, Nyankopɔn Baasakoro No, Wiase Foforo Nkyerԑase, Woredɔ Yehowa
Afe 2000: Wᴐyԑԑ nsakrae wᴐ Ͻwԑn Aban Ahyehyԑde nhyehyԑemu: Continue reading “Yehowa Adansefo – abakᴐsԑm ne gyidi”
Author WebmasterPosted on February 16, 2013 March 10, 2013 Categories Bible Mmuae ԑkɔ ma Yehowa Adansefo, Yehowa Adansefo Abakɔsԑm, Yehowa Adansefo GyidiTags Atoro Nkɔmhyԑ, Gyidi mu Nsakrae, Ɔwԑn Aban Ahyehyԑde